Sanibar News|Nepal's Best Online Tech ,Deal With Technology , Politics , २० वर्षे युवक ६ महिनादेखि अस्पतालमा बन्धक ! – Sanibar News
२० वर्षे युवक ६ महिनादेखि अस्पतालमा बन्धक !
संखुवासभाको खादबारी नगरपालिका– १० घर भएका जीवनको दैनिकी जसोतसो चलेकै थियो । बुबा गाउँमा सानो तिनो काम गर्थे । उनी पनि मजदुरी गर्थे ।
जीवन गत असार ५ गते भोजपुर षडानन्द गाउँपालिकाको मझुवाबेसीमा इखुवा खोला जललविद्युत आयोजनामा काम गर्न पुगे । त्यसै क्रममा साथीहरुबीच भएको झगडा छुट्याउन गएका उनलाई पछाडिबाट कसैले टाउकोमा रडले हान्यो । फर्केर हेर्दा फेरि रडले घाटीमा हान्यो ।
त्यसपछिको अवस्था उनलाई याद छैन । होसमा आउँदा उनी विराट नर्सिङहोमको आईसीयूमा थिए । ‘घोपामा ल्याउदा उपचार सम्भव नभएपछि यहाँ ल्याएको रे ।’ हातले इसारा गर्दै भने ‘यहाँ बसेको ७ महिना भयो ।’
घाँटीमा गहिरो चोट लागेका कारण चिकित्सकले बोल्न नमिल्ने बताएका छन् । सास फेर्नका लागि घाँटीबाट पाइप हालिएको छ । कसैले प्रश्न गरे हातको इसारा र लेखेर जवाफ दिन्छन् । जीवनलाई उपचारका लागि बुबा गणेशले विराटनगर ल्याएका थिए । उपचार खर्च नभएपछि उनी पनि सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
उपत्यकामा भीडभाड नगर्न प्रशासनको आग्रह
हाम्रो मन्त्री ब्रिगेको हाम्रोनियम जस्ता छन्: नेता कार्की
कोभिडको असर रहँदासम्म मौद्रिक नीति लचिलो
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सभाका लागि १६ उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाएको छ। शनिबार बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानिलकण्ठस्थित निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रियसभा उम्मेदवारको नामावली टुंग्याएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । तर, उक्त बैठकमा संस्थापन इतरका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थिएन। काँग्रेसका राष्ट्रियसभा उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना कम छ । तर, काँग्रेसले आफ्नो राजनीतिक हैसियत र उपस्थितिका लागि उम्मेवारी दिएको...
यसरी परिवर्तन गर्नुहोस् मेसेन्जरमा च्याटको थिम
प्रधानमन्त्री ओली पनि टिकटकमा
१. वीर अस्पतालका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
२. पार्टी प्यालेसमा खाना खुवाउनुस्, भाडा महानगरले तिर्छः मेयर शाक्य
३. काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको उच्च जोखिममा
४. के हो सुगौली संधि ?
५. काेरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा काठमाडौंमा पुन: तीन जना अस्पताल भर्ना
प्रधान सम्पादक - धनराज वास्तविक
सम्पादक - सरोज लामिछाने +977-1-4258733
© २००६-२०१८ Sanibar.com सुरक्षित